Banyere Anyị - Yueqing Hengsheng Refrigeration Co., Ltd
Yueqing hengsheng friji ngwa co., Ltd. na emi odude ke ala gbara osimiri okirikiri na-emeghe obodo - Na songhu ulo oru mpaghara, leqing obodo, Wenzhou obodo, Zhejiang n'ógbè, ụlọ ọrụ specializes na-amị nile di iche iche nke ofufe eriri igwe mmiri collection isi, mmiri mmiri dispensers na mmiri mmiri dispensers. (nkesa), brazed nkwonkwo, sodium cuprate, Gas mkpoko mgbakọ, U - akpa dị iche iche nkọwa, na ntụ oyi ọla kọpa akpa, etc.The ụlọ ọrụ esesịn ebe ndị iso 9001 quality usoro asambodo, na nọgidere mma na iso 9001 ọkọlọtọ, na-eje ozi ndị ọrụ obi dum na dị ka mgbe niile.
Ebe ọ bụ na ya oruru na 1996, ụlọ ọrụ nọgidere ẹkenam elu ngwá, mụbara ọkachamara na oru pesonel, na ẹkenam elu management mode. ya nwere ọtụtụ nchọpụta ngwaọrụ, multifunctional haịdrọlik pịa, anwụrụ Bender, polisher, draya, lathes nke dị iche iche nkọwa, numerically achịkwa lathes na punches.
The ụlọ ọrụ successively nyere iche iche na usoro nke na-akwado na ngwaahịa Panasonic, sanyo, ụgbọelu, Dunham ohia, Tsinghua tongfang, RC, gaokelian, Haier, Bailette na ndị ọzọ a ma ama ụlọ ọrụ. Na mbupụ Europe, America, n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Asia na mba ndị ọzọ na mpaghara.
The ụlọ ọrụ dị na akara na ụkpụrụ nke àgwà mbụ, ime ihe n'eziokwu na mbu, na aiming na "na-achụ Excellence, ahịa mbụ, n'ime na anụ ụlọ na-eche ụwa ihu", na bụ njikere ikwenyere ji ezi obi ibe niile n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ na ịzụlite ọnụ .